Luciano Spalletti oo hadalkan ugu hanjabay Cristiano Ronaldo kadib imaatinkiisa Juventus – Gool FM
(Serie A) 13 Luulyo 2018. Macalinka kooxda Inter Milan Luciano Spalletti ayaa sheegay in saxiixa cusub ee kooxda Juventus Cristiano Ronaldo uusan saameyn ku yeelan doonin fursada ay u heystaan in ay ugu tartamaan ku guuleysiga horyaalka Serie A xilli ciyaareedka soo aadan.
Kooxda Juventus ayaa lala xiriirinayaa in ay ku guuleysan karto dhamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka noqon doonto xili ciyaareedka soo aadan kadib marka ay sameesay saxiixa loogu magac daray saxiixii qarniga.
Laakiin macalinka kooxda Inter Milan Luciano Spalletti ayaa isna qaba fikir ka duwan kan ay dadka intiisa badan aaminsan yihiin.
“Lasoo saxiixashada Cristiano Ronaldo waxay markale sii xoogan doontaa awooda ay ku leeyihiin horyaalka, sida aan horey u soo aragnay”.
“Waxaan lasoo wareegnay Stefan de Vrij, Radja Nainggolan iyo Lautaro Martínez, dhamaantood waa ciyaartoy aad u wanaagsan, mid kasta wuxuu ku fiican yahay booskiisa”.
DEG DEG: Real Madrid oo war rasmi ah ka soo saartay arinta Neymar